Seranam-piaramanidina Nosy Be : Efa afaka miasa taorian’ny asa fanamboarana -
AccueilSongandinaSeranam-piaramanidina Nosy Be : Efa afaka miasa taorian’ny asa fanamboarana
Tsy miandry ela. Tontosa soa aman-tsara ny asa fanamboarana sy fanitarana ny seranam-piaramanidin’i Nosy, izay tantanin’ny Ravinala Airports. Araka izany, nidina tany an-toerana nandray ny fahavitan’ny asa ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fanajariana ny Tany, ary ny Fampitaovana (M2PATE), Benjamina Ramanantsoa, omaly.
Marihina fa tafiditra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena ny fanamboarana sy fanitarana io seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Nosy Be io, ary ny orinasa Ravinala Airports kosa no mitantana azy io miaraka amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Tsiahivina fa ny ekipan’ny CMBI, izay ivondronan’ny orinasa Colas Madagascar sy ny Bouygues Bâtiment International, no mandray an-tanana ny fanamboarana sy ny asa fanitarana.
Nanambara kosa ny minisitry ny M2PATE, Benjamina Ramanantsoa, tamin’ny lanonam-pandraisana ny asa vita fa tontosa avokoa ny asa rehetra, araka ny fandaharam-potoan’ny asa izay efa voafaritra mazava. Voalaza ihany koa fa miavaka tsara ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina amin’ilay fahamoran’izy ireo.
Tsiahivina fa nanomboka ny 18 septambra 2017 teo ny asa fanamboarana sy fanitarana io seranam-piaramanidin’i Nosy Be io. Efa afaka mampiasa azy kosa ny fiaramanidina rehetra avy amin’ireo kaompaniam-pitaterana amin’izao fotoana izao. Marihina fa nisy ny “notam” nalefa tamin’ireo kaompaniam-pitaterana an’habakabaka amin’ny fifandaminana rehetra amin’ny fampiasana io seranana io. Na izany aza, tsy nisy mihitsy ny fanafoanana ireo sidina rehetra, ary miasa ao anatin’ny ora tsy hisian’ny sidina kosa ny Ravinala Airports.
Ankoatra izay, nanomboka ihany koa ny asa fanamboarana ny fanadiovan-drano, na STEP sy ny toeram-piantsonan’ny fiara eny amin’io seranam-piaramanidin’i Nosy Be io. Araka izany, ny faran’ny volana aogositra, na voalohandohan’ny volana septambra 2018 kosa ny fahavitan’ny asa rehetra mikasika io seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Nosy Be io.